Poeta mpikatroka Myanmar voaheloka noho ny fanoherana ny fahatapahan’ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
Handoa onitra i Maung Saungkha fa tsy higadra 15 andro
Voadika ny 07 Septambra 2020 6:06 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Français, Español, Ελληνικά, English
Maung Saungkha tamin'ny andro nanamelohana azy. Saripikan'ny Radio Free Asia amin'ny fiteny Birmana. Copyright © 1998-2020, RFA. Nahazoana alalana avy amin'ny Radio Free Asia, 2025 M St. NW, Suite 300, Washington DC 20036. https://www.rfa.org.
Nomelohin'ny fitsarana iray ao an-toerana ny poeta sady mpikatroka iray antsoina hoe Maung Saungkha noho ny fanitsakitsahana ny lalànan'ny fivoriana milamina sy ny filaharana milamina.
Voampanga tamin'ny fihetsiketsehana iray notontosaina tamin'ny 21 jona tao an-tanànan'i Yangon raha nitondra sora-baventy mivaky hoe “Notapahana ve ny aterineto hanafenana ny heloka an'ady sy ny famonoam-bahoaka?” i Maung Saungkha, mpiara-manorina ny vondrona mifototra amin'ny fikarohana fandalàna fahalalaham-pitenenana iray antsoina hoe Athan.
In'enina notontosaina ny fihainoana an'i Maung Saungkha tao amin'ny fitsarana nanomboka ny 7 jolay ka hatramin'ny 21 aogositra. Manamboninahitra polisy iray no nijoro vavolombelona niampanga azy, nilaza fa nanomana fihetsiketsehana tsy nampilaza mialoha ny manampahefana izy. Nambara tamin'ny 4 Septambra ny didim-pitsarana nanamelohana azy, rehefa niangavian'ny mpitsara izy ny hisafidy ny higadra 15 andro any am-ponja na handoa onitra 30.000 Kyat ($22,50 dôlara amerikana). Ny farany no nosafidiany.
Nampidirin'ny fitsarana ho ahy ny fandoavana onitra 30.000 MMK na fanagadrana 15 andro noho ny fanomanana fanentanana fampitsaharana ny fahatapahan'ny aterineto ao amin'ny fanjakana Rakhine sy Chin. Mankasitraka anareo rehetra noho ny fanohananareo.
Manamarika ny fahaherintaona namerana ny aterineto sy ny fifandraisana tao amin'ny fanjakana Rakhine ao Myanmar ny datin'ny 21 jona taorian'ny fifandonana nisy teo amin'ny miaramilan'i Myanmar sy ny vondrona mitam-piadiana ara-poko iray. Nilaza ireo mpandraharahan'ny fifandraisandavitra ao an-toerana fa nodidian'ny manampahefana ry zareo hametra ny serivisy 3G ao amin'ny faritra hatramin'ny Oktobra 2020.
Nanao fanangona-tsonia nalefa tany amin'ny governemanta ny Athan sy ny vondrona firaisamonim-pirenena hafa hamerina feno amin'ny laoniny ny aterineto ao Rakhine, indrindra raha mila torohay ara-pahasalamana iankinan'ny aina momba ny COVID-19 ny mponina ao an-toerana.
Tamin'ny imailaka iray nalefa tany amin'ny Human Rights Watch tamin'ny 12 aogositra, notsikerain'i Maung Saungkha ny fanohizana amin'ny fampiasana ny lalàna izay manimba ny fahalalaham-pitenenana:
Tsy mahita aho marika na fikasana hanatsarana ny fahalalaham-pitenenana eto Myanmar. Araka ny hevitro, mitsara ny olona ny governemanta noho ny fihetsiketsehana anoherana ny fahatapahan'ny aterineto satria tadiaviny hatrany ny hahatapahan'ny aterineto any amin'ireny faritra ireny.
Tonga teo amin'ny fahefana tamin'ny taona 2015 tanatin'ny fandresena miezinezina ny antoko mitondra ao Myanmar amin'izao fotoana, ny Ligy Nasionaly ho amin'ny Demaokrasia (NLD). Olo-malaza ao amin'ny fanoherana tao amin'ny hetsika demaokraty izay nanohitra mafy dia mafy ny jadona miaramila no nitarika io antoko io.
Ny fanamelohana an'i Maung Saungkha no famantarana iray hafa amin'ny fandamohan'ny NLD hamadika ny politika nampiasain'ny governemanta miaramila teo aloha hanampenam-bava ny feo manivaka.
Araka ny fikarohan'ny Athan, fitoriana heloka bevava miisa 91 no niampangana mpikatroka, mpianatra, mpanao fihetsiketsehana milamina tamin'ny lalànan'ny famorian'olona milamina hatramin'ny taona 2015.
Nanoritra Ismail Wolff, talem-paritry ny Fortify Rights, fa tsy tokony notsaraina noho ny fanehorana fotsiny ny governemanta i Maung Saungkha:
Mety ho tsy any am-ponja i Maung Saungkha amin'izao fotoana izao saingy tsy tokony nosamborina mihitsy aloha na niatrika fitsarana noho ny fiarovana ny zon'olombelona. Ao anatin'ny fikasana hampanginana hatrany ireo miteny manohitra ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ireny fisamborana sy fanamelohana ireny.